Tusiyaha Miisaanka & Miisaanka, Gudbiyaha Miisaanka, Miisaanka Crane - Heavye
Hangzhou Heavye Technology Co., Ltd., oo ku taal magaalada quruxda badan ee Hangzhou, waa shirkad shahaado ah oo China National High-tech Enterprise, iyo Zhejiang SMS Sci-Tech Enterprise, iyo sidoo kale xubin ka mid ah Shiinaha Culayska Qalabka Ururka, oo ku takhasusay cilmi-baarista & horumarinta , qalabka wax-soo-saarka iyo suuq-geynta iyo qalabka miisaanka.
Anagoo adeegsanayna kooxdayada xiisaha leh, qalabka horumarsan, maarayn tifaftiran, naqshado cusub, iyo falsafadeena "si aan daacad u noqono, xoogga u saarno, u dadaalno oo aan rabno inaan wadaagno", waxaan leenahay in ka badan 16 sano oo miisaamaya khibrada warshadaha iyo farsamada aasaasiga ah.
WAX KA BADAN
soo ururi macluumaadka qalabka miisaan ee tayada sare leh ee ugu dambeeyay
Soo saaraha Qalabka Miisaanka Tayada
Cilmi-baarista iyo naqshadeynta Qalabka Miisaamidda Dhaqdhaqaaqa ee Baabuurka
Horumarka degdega ah ee warshadaha gaadiidka, waxa ay sidoo kale keenaysaa ifafaalaha baabuurta xamuulka qaada. Si loo joojiyo dhacdadan xun, Shiinuhu wuxuu si xoog leh u dhiirrigeliyaa habka lagu dallaco miisaanka. Iyada oo la faafiyey habka miisaanka iyo dallacaadda, shuruudaha...
Naqshadaynta qalabka ee nidaamka miisaanka firfircoon ee foorarsiga saxanka
Horumarka degdega ah ee gaadiidka waddooyinka waaweyn, miisaanka xamuulka dhaqdhaqaaqa firfircoon ee dhaqameed wuxuu awoodi waayay inuu daboolo baahida suuqa ee hadda jirta. Miisaanka xamuulka firfircoon ee dhaqameed wuxuu inta badan leeyahay dhibaatooyinka soo socda: sababtoo ah qaabdhismeedka makaanikada ee kakan ee miisaanka, ma xamili karo xawaaraha sare ...
Tusiyaha Miisaanka Wireless-ka ee HF300 oo leh S...
HF132 Taxanaha Multi-line Multi-line Price Comp...
HF22 Taxanaha IP67 Shahaado leh oo aan biyuhu lahayn oo heer sare ah...
HX134B Awood hoose oo Bluetooth ah oo BLE ah
HX134F Gudbiyaha Wireless-ka Saxda ah ee Sare ee A...
HX230F IP67 Birta aan Biyo La'aanta Lahayn ee Shahaadaysan
Taxanaha HF105 Ujeedada Guud ee Tayada Sare leh...
Daawo Wax Badan